Maalinta: Diseembar 13, 2019
Wadooyinka iyo gaadiidka badda ayaa muddo dheer ka mid ahaa jidadka ugu macquulsan ee gaadiidka adduunka. Sanadihii la soo dhaafay, waxay kuxirantahay ballaarinta dalkeenna, baahida dhoofinta iyo dhoofinta labadaba aad bey u sarreeyaan. [More ...]
Wadada Wadada Eskişehir Dhamaadka dhamaadka Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay waddaa mashruucyo cusub si ay u yareyso isu socodka magaalada oo ay u buuxiso baahiyaha gaadiid ee shacabka caasimadda. Hal gacan dayactir waddo, balastar, asphalt [More ...]
Shirka Gaziantep Dawlada Hoose Gaziray Commuter Line Information Information Kulan ayaa la qabtay, macluumaad ku saabsan 5 kilomitir shaqooyinka dhulka hoostiisa ah ee la bilaabay Mashruuca Gaziray. Duqa Magaalada Waaweyn ee Fatma Şahin [More ...]
Alanya Calaamadaha Gawaarida Calaamadaha Diyaarinta Jiilaalka; Waaxda Antalya ee Dawlada Hoose ee kooxaha farsamada taraafikada, Alanya waxay sameysay qabanqaabadii jiilaalka ee nidaamka calaamadaha. Antalya Metropolitan Municipal, bartamaha magaalada Alanya ee gaariga iyo taraafikada [More ...]
Dhibaatooyinka Khadadka Tareenka ee Samsun Sivas ma dhamaanayso; 88 sanadlaha ah ee Samsun-Sivas Qadka tareenka ee adag, 4 sano ka hor, shaqada casriyeynta ayaa bilaabatay wali lama gaari karin. Marka loo eego xogta ku jirta Warbixinta Hantidhawrka ee SAI [More ...]
Qalin jabiyayaasha Dugsiga Sare ee TÜVASAŞ Ayaa Si Rasmi Ah U Shaqayn Doona; Turkey baabuur Industry Co. Waxaa lagu daabacay Rasmiga (Agaasinka Guud) rasmiga ah si loo qoro shaqaalaha iyada oo aan KPSS ka jirin ISKUR. Codsiga wuxuu raadinayay musharixiinta ku dhawaaqida soo iibsiga [More ...]
Go'aanka Madaxtinimada, Toprakkale Iskenderun Motorway marinka xorta ah ee udhaxeeya saldhigyada wadada Payas-Iskenderun waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah wuxuuna dhaqan galay. Markaa, gawaarida isticmaalaya qaybta Payas-İskenderun ma bixin doonaan lacag bixin. Si toos ah ula xiriir payas [More ...]
Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 dad ayaa ku dhintey 328 dad ayaa ku dhaawacmay shil tareen oo dhacay dhageysiga afaraad ee kiiska, Xarunta waxbarashada dadweynaha Çorlu ayaa la arkay. Dhamaadka dhageysiga, xeer ilaaliyuhu wuxuu bixiyay ra'yigiisa halka dhageysiga lasiiyay 21 Abriil 2020. [More ...]
Sharciga No. 2547 ee cutubyada dib-u-habeynta ee Jaamacadda Ankara iyo Xeerarka Hakkında ee Nidaamyada iyo Mabaadi'da Ku Saabsan Imtixaanaadka Bartamaha iyo Imtixaannada Galitaanka in lagu Meel mariyo Ballamada Shaqaalaha Akadeemiyada ee aan ahayn xubinta Kuliyadda ”. [More ...]
Qodobka 657 / D ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee Lambarka 4, Sharciga Shaqaalaha No. 4857 iyo Qaab-qorista Shaqaalaysiinta Hay'adaha Dawliga ah iyo Hay'adaha in laga shaqaaleeyo shaqaale joogto ah oo ka tirsan cutubyada Jaamacadda Tarsus University. [More ...]